Posts posted by Kamaavi
Madaxweynaha cusub, Xasan Sh. Maxamuud wuxuu helay 190 cod, halka madaxweynihii hore, Shariif Sh. Axmed uu helay 79 cod. Waxaa codkooda dhiibtay 269 xildhibaan, waxaana ka gaabsatay 2 xildhibaan.
Aw-guuryo to madaxweynaha cusub,,,,..
OTP- Raysul Wasaarahii hore ee Soomaaliya Muddane Dr Cali Khaliif Galayr oo ka soo qayb galay Shirkii Magaaladda Taleex ee Lagu dhisay Maamul Gobaleedka Khaatumo State Of Soomaliya ayaa Maalimadii Shalay Yimid Magaaladda Jigjiga isagoo soo maray Gobalka Wardheer Caasimadda Wardheer, Cali Khaliif ayaa la sheegay inay soo Gudbiyeen Xadka Gobalka Soomalidda Ogadeenya uu la wadaago Soomaliya, Ciidamadda Maamulka Kililka ee loo yaqaan Liyu-Boolis.
Cali Khaliif Booqashadiisa Magaaladda Jigjiga uu ku yimid ayaa tilmaamayso Khilaaf sii xoogaysta oo dhex-yimaadda Maamulka la magac-baxay Somaliland ee Gobalka Waqiiyiga Soomaliya Iyo Xiriirka Dowladda Itoobiya oo maal-mahan danbe ahaa Caga Jiid.
Maamulka Somaliland ayaa eedaynaya Maamulka Kililka Iyo Dowladda Itoobiya, in kastoo si rismi ah aysan u eedayn ayay hadanna la filayaa In Wafti ka socota Maamulka Hargaysa ay u soo safrayaan Adiss Ababa.
Shirka ka furmay Magaaladda Taleex oo uu ka soo qayb galay Raysul Wasaarihii Hore ee Soomaliya Muddane Cali Khaliif Galayr ayaa ku noqday Maamulka Siilaanyo Dhinbil Dab ah isla markaasna la yaaban Taageeradda uu Cali Khaliif ka haysto Dowladda Itoobiya Iyo Maamulka Kililka.
Cali Khaliif ayaa si wayn loogu soo dhaweeyay Magaaladda Jigjiga Isagoo Baabuur Ciidan gooni ah waardiyayna lagu wadday. Cali Khaliif ayaa ah nin si wayn ooga soo hor-jeeda kala go,go Jamuuriyadda Soomaliya.
^Malahu waa xaaraan, anaba jooga ee waxad malayn i waydii..
Zanaawi ha duu aabe noqdo sow habraha gooni istaga ninkoodii noqon maayo? Riyaale Kaahin intuu ku danbeeyey? Geeska Afrika waa la is yaqaan, laakiin Cyberwordka ninkiii been loogu akhriyi ama iska dhigi wuxuuna aheyn isagey jirtaa.
Awaare iyo Daroor dhiigna maadan u daadin , horumarna ma adan ka geysan waxaad ka tahay gooni istaag marka magaalo hoos timada wiilasha Zenawi korsadey sawirkeedu waxba kuu sheegi maysee iska aamus!
Jijiga warar wanaagsan ayaa ka imanaya, waxaa kamida wafti heer sare ah oo ka socda Khatumo state in si kal iyo laab leh loogu soo dhaweeyeey, taas maxaad ka tidhi xayraan xunjufoow?
The reason you didn't talk about khatumo...Lol
Qabri-dahare waa magaalo taariikhi ah oo da' weyn, Jijiga isku fac ma ahan. Nasiib daro waa suu Che sheegey waana runtiis, dagaalo aan kala joogsi laheyn ayaa ka jira waana goob uu ceelka shidaalka ee Qaalub ka dhawyahey taasoo keentay in cudud ciidan oo ka badan tirida shacabka magaalada afarta gees ka degaaan. Sawirka kor ku xusan ayaad ka arki kartaa askarta ama maryo celiska qaarkood.
Magaalooyinka kale ee soo raaca Q.dahare waxaa ka mid ah Wardheer, Garbo, Dhanaan, Fiiq , Godey, Dhagax-buur iyo tuulooyinka ka ag dhow waxaana ka jirta gumaad ba'an. Ha ahaato; cuno qabatayn xag ganacsi iyo xag mucaawano caalami ah, dil, dhac, kufsi iyo xabsi sharci darro ah oo aan loo kala aaba yeelayn yar iyo wayn toona. Sawiro in laga soo qaado way adagtahay laakiin il xumada magaalooyinkan iyo dhamaan dhulka Somali galbeed waxaa ka dheehan kartaa filimada Ina Iley jilo ee laga soo daayo Televetion-kiisa gaarka u ah, ESTV.
Mooge, walaalow qabiilka aad sheegi waa looga badanyahay waxaana magaalda looga danbeeyaa Wiil-waal laftuu ka soo jeedo intaas ka sokow waxaa kaloo moogtahay in walaalaha Somaliyeed ee ku dhaqan Somali galbeed ay dhexda u xidheen sidey dhulkooda u dhisan lahaayeen( meeelaha amaanka ah) ama u xoreyn lahaayeen( meelaha cadaadisku ka jiro) oo ay ka koreen aragtida maan-gaabnimada ah ee qabiilka ku dhisan. Jijiga oo dhisanta ama Q.dahare oo xoroowdo Somali oo idil ayey dan u tahay oo dhulkoodii oo xoroobay ama dhismay uu yahay.